Huawei's EMUI 12 bụ onye ọrụ ugbu a wee bịa na ọtụtụ mgbanwe na ndozi | Androidsis
Huawei ewepụtala ụdị nhazi ọhụrụ ya, nke bụ Ihe ngosi EMUI 12. A na -atụ anya nke a n'oge na -adịbeghị anya ma ọ dị ka ọ ga -abụ ụdị HarmonyOS 2.0 zuru ụwa ọnụ maka ahịa mba ụwa, ebe a ga -ekenye naanị nke a naanị na China.
Dị ka atụ anya, Huawei EMUI 12 na -abịa na nkwalite dị iche iche, mgbanwe na atụmatụ ọhụụ. Ọ bụghị maka ihe ọ bụla na -atụ anya ịbụ ụdị ihe na -atọ ụtọ karịa EMUI 11 na ndị bu ya ụzọ, mgbe ahụ anyị na -ekwu maka ihe niile ụdị firmware ọhụrụ a ga -enye nke ahụ, n'agbanyeghị na ekwuputala ya ma wepụta ya n'ihu ọha, amabeghị ihe ọ bụla. gbasara ọbịbịa ya na ekwentị mkpanaaka site na mmelite ma ọ bụ kalenda ọ ga -anya isi.
1 Nhazi ọhụrụ, mma na nhazi ahaziri nke ọma, nchekwa dị mma yana arụmọrụ dị elu: nke a bụ ihe EMUI 12 na -enye
2 Ekwentị ole ga -ebu ụzọ nweta EMUI 12 kedu mgbe ha ga -enweta?
Nhazi ọhụrụ, mma na nhazi ahaziri nke ọma, nchekwa dị mma yana arụmọrụ dị elu: nke a bụ ihe EMUI 12 na -enye
Ihe mbụ anyị nwetara na ọ pụtara na EMUI 12 bụ ọhụrụ gị interface, nke na -enye ya nlegharị anya ọhụrụ, ọhụrụ na, n'otu oge ahụ, ahaziri nke ọma, yana mgbanwe aghụghọ na -eme nnukwu mgbanwe, ma e jiri ya tụnyere ihe anyị nwere na EMUI 12 na ụdị ndị bu ụzọ.
Site na ụdị firmware ọhụrụ a sitere n'aka onye nrụpụta China, bọtịnụ dị ntakịrị ma hazie ya n'ụzọ ka mma, bụrụ ihe na -atọ ụtọ n'anya, ihe bụkwa n'ihi ihe ngosi ọhụrụ nke ọ na -abịa, nke sitere n'okike, dị larịị ma dịkwa mmiri mmiri. Nke a na -eme ka ịgagharị site na interface bụrụ ahụmịhe ngwa ngwa yana nkasi obi karị. Na mgbakwunye, enwekwara ọrụ na -enye gị ohere ịgbanwe ọkpụrụkpụ nke mkpụrụedemede font (leta).
Ọzọkwa, n'ihe gbasara arụmọrụ, EMUI 12 na -enye ọsọ na ọsọ karịa, ihe a na -ahụkarị mgbe ị na -eme ya akwụkwọ mpịakọta (swipe) na ibe weebụ nke ihe nchọgharị ahụ, n'ezie, na -agagharị n'etiti ngwa na ihe ndị ọzọ, n'ihi na ọtụtụ ọrụ bụ ihe na -arụ ọrụ nke ọma ugbu a, nke a bụ n'ihi na njikwa RAM ka mma na CPU (processor).
N'ihe gbasara nchekwa na nzuzo, Huawei apụtachaghị nke ọma na ole mgbanwe o mere metụtara okwu a. Agbanyeghị, o kpughere nke a obere oge EMUI 12 na -elekwasị anya nke ọma na ngalaba a, na -echekwa nke ọma mgbe ị na -emepe ekwentị na, n'ezie, jikọta ya na ngwaọrụ ndị ọzọ dị ka mbadamba, laptọọpụ, na ndị ọzọ. Ọ bụkwa n'echiche a na ugbu a ị nwere ike ịkpọghe ekwentị site na laptọọpụ site na iji okwuntughe e guzobere na mbụ, n'etiti ihe ndị ọzọ.
N'aka nke ọzọ, n'ihe gbasara ọrụ na ngwa, enwekwara ihe ọhụrụ metụtara MeeTime, ngwa nke Huawei maka ịkpọ oku vidiyo nke mmadụ na otu nke na-ebukarịrị arụnyere na ekwentị na ngwaọrụ ha. Ma ọ bụ ya enwere ike ịnyefe oku site na ekwentị gaa na TV, mana naanị ma ọ bụrụ na ọ kwadoro ọrụ dị otu a; ma ọ bụghị, ị nweghị ike.
N'aka nke ya, Huawei emeela ka mma mbufe faịlụ nkekọrịta na EMUI 12Yabụ, ekwentị ndị na -enweta ụdị firmware a na -ejikọ n'ụzọ ka mma na ngwaọrụ ndị ọzọ dakọtara, yana ekele niile na Ngwaọrụ +, nke ha na ha nwekwara ike ịmekọrịta nke ọma.
Ekwentị ole ga -ebu ụzọ nweta EMUI 12 kedu mgbe ha ga -enweta?
Dị ka anyị kwuru na mbido, Huawei ekpughebeghị ihe ọ bụla gbasara usoro mmelite EMUI 12. Agbanyeghị, a na -atụ anya na onye nrụpụta China ga -enye OTA ụwa niile n'ọnwa na -abịa, nke bụ Septemba.
N'ezie, dịka a tụrụ anya ya, mmelite ahụ ga -amalite iru mobiles ole na ole, wee jiri nwayọ, wee gbasaa na ụdị ndị ọzọ na mba dị iche iche. Ọzọkwa, ọ bụ ezie na amabeghị ekwentị ga -ekele gị, a na -atụ anya na ha ga -abụ Huawei P50 ndị na -enweta ya n'ihu ndị ọzọ, ma ọ bụ opekata mpe, nke ahụ bụ ihe atụmanya na -egosi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Huawei's EMUI 12 bụ nke gọọmentị wee bịa na ọtụtụ mgbanwe na ndozi